Naing BSell | Item - CHY cushion ရေစိုခံ
CHY cushion ရေစိုခံ
Yukita Online Shop
❤ အစင်းကြီးခါးရှည် ❤
စပန့် ခါးကြိုးချည်😍😍 Ws- 5300 Freesize. အစဉ်စုံ ၅ထည်တွဲ အရမ်းတန်😍မ1
🎋ဖဲပြားခါးတို အကျီ ​🎋
ဈေးနှုန်း 4800 ကျပ်
💦💦💦သကြန်နီးပြီဆိုတော့ ရေစိုခံ ချွေးစိုခံတွေ လိုအပ်ပြီနော် အဲ့ဒီအတွက် ထိုင်း မိတ်ကပ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ထိုင်းမလေးတွေတောင်အသဲစွဲသုံးနေကြပြီနော် 😋
ဈေးနူန်းကလဲ မများပဲ ပစ္စည်းကောင်းသုံးရမှာပါ
1. လိမ်းလိုက်တာနဲ့ မိမိမျက်နှာနုအိချောမွတ်စေတဲ့ခံစားချက်ကို ချက်ခြင်းသိရမှာပါ
2. တိုနာ နို့ရည် နေလောင်ခံပါဝင်လို့ အများ လိမ်းပြီး မျက်နှာ သစ်ပြီးရင်တောင် ချွေးပေါက်တွေကျဥင်္းပြီး ဖြူစင်နေဦးမှာပါ 🌸🌸🌸
3. လိမ်းချယ်ထားချိန်မှာ မိမိမျက်နှာ အသားအရေ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးရွားကြမ်းတမ်းနေပါစေ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အပြစ် အနာအစာ များကို ဖုံးကွယ်ပေးပြီး ဖြူအိနုညံ့မှု့တွေနဲ့ လူတကာ ငေးကြည့်ရတဲ့ မျက်နှာလေး ဖြစ်နေမှာတော့ အာမခံရဲပါတယ် ❤❤❤
4. အဆီပြန်ခြင်း မျက်နှာညိုမဲ ကြမ်းတမ်းခြင်း ဝက်ခြံ အမာရွတ် အမဲစက် တင်းတိတ် ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ Collection Me Cushion တစ်မျိုးထဲလိမ်းလိုက်ရုံနဲ့ အရာရာ ပြည့်စုံပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု့ အပြည့်အဝပေးနိုင်မှာပါရှင့် ရေစိုခံ ချွေးစိုခံ Korea နည်းပညာ အဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဘယ်လောက် ရေစိုစို ရေစိုလေ မိတ်ကပ်သား တက်ပြီး ဖြူနု လေလေ ဆိုတော့ ကျမတို့ Admin တွေတောင် လိမ်းဖို့ ဖယ်ထားပြီးပါပြီ 😁😁အသားဖြူသူအတွက် lightအသားညို သူအတွက် brown ဆိုပြီး ကာလာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော် မိမိ အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်ညီတာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ 😁😁😁💦💦
မှာယူလိုပါက... ***အမည်,ဖုန်းနံပတ်,နေရပ်လိပ်စာအတိအကျကို Cb ပါကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။***မြို့တွင်းDeliရှိပါသည်။ (ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေရပါသည်။)
***နယ်မြို့များသို့ အနီးဆုံး ကားဂိတ်ကနေတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ် ရှင်။နယ်မှမှာသောCustomerများ ဘဏ်ကနေ ငွေကြိုလွှဲပေးရပါမယ်ရှင်။တန်ဆာခကိုဝယ်သူဘက်မှပေးချေရပါမယ်ရှင်။
*** ပို့ခတွေကတော့ မြို့နယ်အလိုက်